MS office 2013 in Mya Font - MYSTERY ZILLION
MS office 2013 in Mya Font
ရုံးက MS office 2013 License နဲ့ သုံးနေတာ -Win---Kalaw , Win---Researcher စတဲ့ --- ပါတဲ့ဖောင့်နဲ့ ရိုက်မရတဲ့အပြင် အရင်ရိုက်ထားတာတွေ လည်းဖွင့်မရဘူးဖြစ်နေတယ် အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေပဲပေါ်နေတယ် ဘယ်နေရာမှာ setting ပြောင်းပေးရမလဲ
Please answer to me everybody
Clear Type ကို on ထားလား ? တချို့ Font တွေက Clear Type on မလုပ်ထားရင် office 2013 ပြဿနာ တက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မြန်မာစာကိုတော့ မစမ်းကြည့်ဖူးဘူး။
Display (on bottom left pane)
check on Turn on ClearType
Use all monitors (If you have multi displays)
Choose settings as you like and complete the wizard.
Now you all set.